ဂန္ထဝင်စက်ဘီးဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ ဂန္ထဝင်စက်ဘီးဘဲလ် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. အရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်အတူ clients များပေးအပ်မှာသူတို့ကိုအထောက်အကူပြုသောကျယ်ပြန့်စက်မှုလုပ်ငန်းဗဟုသုတအသိပညာများရှိသည် ဂန္ထဝင်စက်ဘီးဘဲလ် နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုလိုက်နာမှုနှင့်အတူဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်း Taiwan ။ သာယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရရောင်းချသူထံမှထိုထုတ်ကုန်သည့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အရည်အသွေး controller များ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်အဖွဲ့၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်တစ်ဦးတင်းကြပ်ရဲ့အရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်းကိုသည်းခံ။
ပုံစံ - JH-810STCP
တောက်ပ&အဖုံးသန့်ရှင်းပါ–ဂန္ထဝင်&ဒီဇိုင်းလှတယ်,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည် ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/classic-bicycle-bell.html
အကောင်းဆုံး ဂန္ထဝင်စက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ဂန္ထဝင်စက်ဘီးဘဲလ် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ဂန္ထဝင်စက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
ပစ္စည်း:သံမဏိ sliver အပေါ်ဆုံးနှင့် UCP အခြေစိုက်စခန်း.အရွယ်အစား:၅၈ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10pc/box 200pc/ctn.,1.၆ ပေ.ဆး.ဒဗလျူ.:၁၈ ကီလို G.ဒဗလျူ.:ကီလို ၂၀ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ခေါင်းလောင်းသံကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကနားလည်ပြီးအသက်အရွယ်မရွေးလူတိုင်းအလွယ်တကူနားလည်နိုင်ပါတယ် အဟောင်း-အပေါ်မှဂန္ထဝင်ပုံစံဖြင့်ကျောင်းသတ္တုအဖုံးနှင့်အောက်ခံဒီဇိုင်း ငွေရောင်လှတယ်-chrome finish သည်သင်၏စက်ဘီးကိုစတိုင်ကျစေသည်. Lever သည်ထိတွေ့ရန်လွယ်ကူသည်,ခေါင်းလောင်းသည်အနည်းဆုံးအားစိုက်မှုဖြင့်လေးနက်သောအသံကိုဖန်တီးသည် အသံကြည်လင်ပြတ်သားသည်:သတ္ထုစက်ဘီးလက်စွပ်ဘဲလ်သံသည်သင်စီးနင်းသည့်အခါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာကြားနိုင်ရန်ကျယ်လောင်ပြီးရှင်းလင်းသောအသံကိုဖန်တီးနိုင်သည်,မင်းရဲ့စီးနင်းမှုကပိုလုံခြုံလိမ့်မယ်